Sawirro: Koonfur Galbeed oo dooratay Senatorkii u horreeyey – Yaa kusoo baxay? - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Sawirro: Koonfur Galbeed oo dooratay Senatorkii u horreeyey – Yaa kusoo baxay?
Sawirro: Koonfur Galbeed oo dooratay Senatorkii u horreeyey – Yaa kusoo baxay?
Guusha ayaa waxa ay raacday Zamzam Ibrahim Cali oo 81 cod heshay, halka 4 cod ay heshay masharrax Shariifo Xaji Cismaan oo la tartameysay, waxaana sidoo kale halaabay illaa 7 cod, sida uu ku dhawaaqay guddiga doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed.
Zamzam Ibrahim Cali ayaa horey u aheyd Senator ka tirsan Golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, iyada oo markale difaacatay kursigeeda.
Sidoo kale waxaa haatan la guda-geli doonaa doorashada afarta kursi ee kale ee la shaaciyey, taas oo isla maanta lagu qabanayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.